Isu tanga takahwanda chokwadi nezve piritsi rekuzvidzivirira kubvira 1975 - AFRIKHEPRI
Tiri kuvanza chokwadi pamusoro pemishonga yekudzivirira kubva kuna 1975
LKune mamirioni akati wandei emadzimai anotora piritsi, rekuzvidzivirira kwehomoni kana a kurapwa kwekuenda kumwedzi. Asi vazhinji vevakadzi ava havazivi kuti zvinodhaka izvi zvinoshanda sei uye zvinogumisirei zvavanogona kuita pamitumbi yavo. Kubvunzurudza naPr Henri Joyeux, munyori webhuku re "Pill pill" (Éditions Rocher), naDominique Vialard.
Mazana mazana emakororo akabudiswa pamusana pemigumisiro yepiritsi uye kuora kwepiritsi. 3e uye 4th zvizvarwa ndicho chiitiko chekutanga chekuti chii chingava kukundwa kukuru kwechiremba kwemazana makumi maviri nemakore zana. Ko tinoziva, semuenzaniso, kuti mahomoni ekugadzira ndeaya kune kenza yemazamu chii asbestoti chirikunyengedza kenza?
In 1975, 7 000 makanga zviitiko itsva gore kenza yemazamu kuFrance. In 2013, paiva 60 000, uye vakadzi vaduku uye muduku nokuda piritsi ... nekenza, sitiroko, thromboembolism, kuora mwoyo, kurasikirwa libido, autism vana ... zhinji zvakakomba nemishonga uye zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobatanidzwa.
ne Chipiritsi chepabonde (Éditions Rocher) Pr Henri Joyeux uye Dominique Vialard, tinoonawo kuti nei zviremera zvechiremba uye vazhinji vechiremba vakanyarara uye vanoramba vachirapa zvinodhaka zvinodhaka. Kusangana nemumwe wevanyori vaviri, Prof. Henri Joyeux. Maintenance.
Sei wakasarudza kunyora bhuku iri?
Pr Henri Joyeux : Iko kushungurudzwa kwe3ème uye 4th chizvarwa chepilisi chakaridza mazita. Vakadzi vatengi vakafumura dambudziko remapiritsi aya. Idzi ruzivo, rwakaparidzirwa nehuwandu hwemashoko, rwakakanganiswa uye rwakavhiringidza vakadzi vazhinji vechidiki. Zvechokwadi vainyanya kupedza mapiritsi aya.
Munguva pfupi yapfuura mukadzi wemakore 35 asina mwoyo wakaipa kana ropa uye asina kusvuta akaurayiwa nehutano hwemwoyo. Aipedza mapiritsi aya ... Ndinokubvumira iwe kufungidzira mhuri ine vana vaduku!
Kunyanyisa, kutengesa kwemapiritsi aya kwakaderera, nekuda kwekutya kukuru uye chisarudzo chehurumende chekuti havasati vavadzorera zvakare kuti vasave vane mhosva yezvinetso uye kuti vasapinda mudare, saMnu Servier pamwe neChitsva.
Ndeipi migumisiro yeHommonal contraception pamusoro pevakadzi?
Pr Henri Joyeux : Hafu yebhuku redu inovanyorera zvakanyatsorondedzerwa uye inotsanangura nenzira yesayenzi inonzwisiswa nevanhu vose. Kunwisa nomupiro hormone pamusoro mahormone hadzi mbiri (inonzi estrogen uye progesterone) yakabereka zvokugadzirwa nevanhu kana zvinobva hachi weti iri zvine musoro nengozi kuti vasanonoka nhengo dzakadai mazamu, dumbu, ovaries. Vazhinji zvirwere kuduku akadai nyanyisa nokuda piritsi, izvo vakadzi ainzwa zvakawanda sezvinoita zvihwitsi, zadza zvipatara pamwe zvemwoyo matambudziko, pfungwa, ganda vechiduku, asiwo kenza kukanganiswa zamu, cervix chibereko, mazai. Recently chakatoita kunyange kwakabatana vamwe autoimmune zvirwere, zvakadai thyroiditis, lupus erythematosus ... kunwa kubva piritsi.
Iwe unoti tinovanza chokwadi kubva kuvarwere. Ndiani aizotarisira kuviga chokwadi ichi?
Pr Henri Joyeux : Vagadziri laboratories vanowana mabhiriyoni ane marongerwo akasiyana emapiritsi. Vanoti nepamusika pakarepo chaizvo yakanyatsosarudzwa zvokushambadzira, akaedzwa, dzinoongororwa maererano yokutengesa, kunyange muzvikoro uye mumakoreji, kureva, mharidzo, hunogutsa, deletion (pakupedzisira) nemishonga akaona mapiritsi kubva kumarudzi akapfuura.
The dambudziko munyaya iyi kuti hurumende vanosungirwa zvakaitika shoko inodzidzisa kusarudza mapiritsi uye 1ère 2ème zvizvarwa, chaizvoizvo avo vaiva ngozi, basa kusada libido, zviratidzo virilization (mburwa, pasi Matama ..), kufuta uye kufutisa kana zamu chirwere, benign kana akaipa ovarian.
Laboratories vari kukumbira mibvunzo yakarurama ikozvino. Vachakwanisa wekuvamba nekusimudzira mapiritsi 5ème 6ème zvizvarwa uye pakupedzisira zvachose chisingakuvadzi, hazvingaiti, nekuti vakadzi vakarasikirwa chivimbo uye ikozvino vanofungira.
Ndeapi dzimwe nzira dzekudzivirira nadzo dzepabonde zvatingapa vakadzi?
Pr Henri Joyeux : Ichi chikamu chechipiri chebhuku redu. Zviri pachena kuti idzi ndiyo nzira dzemazuva ano, iyo inoshandisa nzira itsva. Vanofanira kubatsira vakadzi kunzwisisa zvakanaka yake yomukati mabasa, kutsvaka mazuva ayo chaizvo yakavimbika yakaorera naro kuorera vaviri kuti akakwanisa sezvo anodikamwa, saka ndine kana asina vana, pasina mabhodhoro kwemakemikari mishonga kuti avhiringidze kwete chete libido asi ndivo yematambudziko kuti vakadzi kare vaibhadhara zvikuru.
Kune kakato mini-makombiyuta mumusika neakavakwa muawa yemaawa uye thermometer, zviri nyore kushandisa. Ingotora kutengesa kwaro mangwanani ose pasi peurimi kwemaminitsi mashomanana uye chekuvhara inotarisa kushanduka kwekutenderera kwako uye inokuratidza iwe nechiedza chemavara mazuva ako ekushaya simba uye anogona kubereka. Ichokwadi, hachiri kukumanikidza kupfuura kufunga pamusoro pokumedza piritsi yako, yakachengeteka uye inoremekedza hupenyu hwevakadzi. Idzi-makombiyuta masikirwo akaenzana nemafoni efoni ari mukurudzika kwakakwana uye achazadza nehutano hwekugadzirwa kwezvinhu uye ikozvino kuziva.
Hurukuro naMarine Tertrais yeJOL Press
Le Pr Henri Joyeux, A chiremba oncologist, purofesa Oncology uye zvomudumbu kuvhiyiwa panguva rorusununguko Medicine pamusoro Montpellier, chiremba Hospital uye Cancer Institute of Montpellier. International Prize nokuti Antoine Lacassagne Cancer basa rake ari kudya, iyewo president Mhuri kweFrance. Iyi inozivikanwa neoncologist yaiva yekutanga kuFrance kuudza vakadzi nezvekukuvadza kwepiritsi Vakadzi kana iwe uchiziva ... yakabudiswa mu2001.
Dominique Vialard, Sciences Po akapedza kudzidza, ave mutori wenhau kune makore anopfuura 25. Akanyora mabhuku akawanda, kusanganisira bhuku rokupedzisira reNobel Prize for Medicine Luc Montagnier, Hondo dzeHupenyu - Zviri nani kudarika kurapwa, kudzivirira, tsanangudzo yemishonga yenguva yemberi yakashandurwa munyika dzakawanda. Mutori wenhau anoongorora hutano uye mishonga inobatsira, anoshanda pamwe nepepanhau paIndaneti Alternative Health.
5 nyowani kubva ku € 20,00
9 yakashandiswa kubva € 13,88
Tenga 20,00 €
kubvira waChikunguru 3, 2020 1:28 am
Mushonga uyu waizorapa chirwere cheshuga, cancer uye zvimwe zvakawanda zvirwere
Tarisa makore gumi nemaviri muranda (12)